Real Estate Broker Kutengesa uye Kubhadhara muColorado
Colorado ((teerera), zvimwe zvakasiyana) inzvimbo yekuWestern United States inokomberedza makomo maodzanyemba Rocky Mountain pamwe nechokumusoro kwakadziva kumadokero kweColorado Plateau uye kumadokero kumucheto kweGreat Plains. Iyo ndiyo yechi8 yakanyanya kuwanda uye 21st inonyanya kuzara nyika yeUS. Chiverengero chavagari vemuColorado vanosvika zviuru zvishanu nemazana mashanu nenomwe, makumi matanhatu neshanu kubva pagore ra1909, kuwedzera kwe14,5% kubva panguva yeC2016 United States Census. Nyika yacho yakatumidzwa zita reRwizi rweColorado, avo vakatanga vatsva veSpain vakatumidza zita rekuti Río Colado ("Red River"). rwizi rwakatakurwa kubva pamakomo. Iyo Territory yeColorado yakarongedzwa musi waFebruary 28, 1861, uye musi waNyamavhuvhu 1, 1876, Mutungamiri weU.S. Ulysses S. Grant akasaina Proclamation 230 achibvuma Coladoado kubatana senzvimbo 38. Colorado inonzi "Centennial State" nekuti yakava nyika zana rimwe mushure mekusainwa kweUnited States Declaration of Independent. Colorado inoganhurwa naWyoming kuchamhembe, Nebraska kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva, Kansas kumabvazuva, Oklahoma kumaodzanyemba, New Mexico kumaodzanyemba, Utah kumadokero, uye inobata Arizona kumaodzanyemba akadziva kumadokero kumaodzanyemba mana. Coladoado inozivikanwa nekumawonekera kwayo kwemakomo, masango, mapani akadzika, messa, canyons, mapara, nzizi uye nzvimbo dzegwenga. Colourado chikamu chemadokero uye maodzanyemba akadziva kumadokero kweUnited States uye ndeimwe yeGomo States. Denver ndiro guta guru uye rine vanhu vazhinji reColorado. Vagari venzvimbo ino vanozivikanwa seColoradans, kunyangwe izwi rekare rinoreva kuti "Coloradoan" rinowanzoshandiswa.